Madaxweyne Xasan Sheekh oo maanta ku wajahan Baydhabo (Sababta booqashada) – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
A warsame 28 October 2014
Mareeg.com: Madaxweynaha Soomaaliya, Xasan Sheekh Maxamuud ayaa la filayaa inuu maanta gaaro magaalada Baydhabo ee gobolka Baay, halkaasoo uu ka furayo shirka Ergada gobolada Baay, Bakool iyo Shabeellaha Hoose oo lagu dhisayo Maamulka Koonfur Galbeed ee Soomaaliya.
Qabanqaabada soo dhaweynta madaxweynaha Soomaaliya ayaa saaka laga dareemayaa magaalada Baydhabo sida ay kusoo warramayaan wariyaasha ku sugan halkaas, waxaana ciidamo farabadan la dhigay gudaha iyo banaanka magaalada.
Waxaa horay magaaladaas ugu sugnaa gudoomiyaha baarlamaanka Soomaaliya Maxamed Sheekh Cusmaan Jawaari, kaasoo shalay kulamo la lahaa guddi xukuumaddu horay ugu dirtay Baydhabo, guddiga farsamada dhismaha maamulka 3-da gobol iyo madaxda dhaqanka saddexda gobol.
Waxaa la diyaariyey ergadii goboladda Baay, Bakool iyo Shabeellaha Hoose ee ka qeybgelaya shirka lagu ansixinayo dastuurka maamulkaas, sidoo kalana lagu dooranayo madaxda maamulkaas.
Shirkaan ayaa waxaa la filayaa inuu socdo muddo todobaad ah, iyadoona lagu dooran doono madaxweynaha maamulkaas oo dadka u sharraxan uu ka mid yahay Shariif Xasan Sheekh Aadan.